दुखिरहेको घाउमा कसैले पनि नुनचुक छर्ने गंभिर भुल कदापी नगरौं । Jwala Sangroula::Point Nepal
दुखिरहेको घाउमा कसैले पनि नुनचुक छर्ने गंभिर भुल कदापी नगरौं । Jwala Sangroula
“प्रतिशोध र मजाकपुर्ण क्रियाकलापले मानिसलाई सत्यताबाट टाढा राख्छ । सोच्न र कल्पना गर्न पनि नसकिने बिषय आरोप लगाएर रवि लामिछाने र उनको टिमलाई तनाव दिँदा मृ*त्युवरण गर्नेले सच्चा श्रद्धाञ्जली पाउँदैन । मृ*तकप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली त्यो हो जुन सत्यतामा आधारित बिषयमा मात्र बहस हुन्छ । रवि जी अब एक ब्यक्ति मात्र होइनन् ,उनि सिंगो संस्था र परिपक्व अभिभावक बनिसकेका छन् । अभिभावक भनेको सधैं सही बाटो देखाउने शिक्षक हो । शालिकराम पुडासैनीको मृ*त्युले रवि जी आँफैले बिक्षिप्त पीडा भोगिरहेका छन् । किनकी एउटा शिक्षकलाई बिद्यार्थीको पीडाले निकै चोट पुर्याउँछ । रवि जीले भोगेको चरम पीडामा मृ*तकका बिषयलाई अनुमानका आधारमा चहर्याइरहेको घाउमा कसैले पनि नुनचुक छर्ने गंभिर भुल कदापी नगरौं ।
यहाँ प्रसंग रवि जी र उनको समुहको समर्थन वा पक्षपुर्ण हुँदै होइन । हाम्रो समाज भीरतिर किन कुदिरहेको छ भन्ने मात्र हो । हामी किन यति निर्दयी भयौं भन्ने हो । यसले रवि जीलाई मात्र पीडा दिंदैन, मृ*तकको परिवारलाई झन पीडा माथि पीडा थपिदिनेछ । सामाजिक संजालमा हामीले पोख्ने अभिब्यक्ति र गर्ने टिप्पणी हाम्रा परिचय हुन् । हामीले हामीलाई कस्तो परिचय दिने हाम्रै हातमा छ । झुठ, कपोलकल्पित, भ्रामक, प्रतिसोध, पुर्वाग्रह र आधारहिन बिषयमा नबोलौं । टिप्पणी वा कुनै बिषय शेयर नगरौं । यसले हामीलाई समाजमा सही परिचय दिनेछ । यस्ता बिषयमा प्रहरीले छानविन गर्छ । न्यायालयले न्याय सुनाउँछ । त्यसपछि चित्त नबुझेका बिषयलाई न्यायालयकै मार्गबाट सुल्झाउने आधारहरु प्रशस्त छन् । हुल र भीडका पछि लागेर आँफै दिग्भ्रमित हुने काम कहिल्यै नगरौं । हरेक घटनाका evidence मा सत्यता प्रमाणित नभइ अनुमान गर्न हुँदैन । यस्ता अनुमानहरु आँफैमा गंभिर अपराधजन्य काम हुन् ।
रबि लामिछानेको बारे अनेक भ्रम छर्दै कुर्लिने झोलेहरु र पत्रकारिता को “प “ पनि राम्रो नसिकेका चाटुकारहरुलाई बरिष्ठ पत्रकार बिनोद त्रिपाठीको सुझाब !!
#We_r_with_Rabi Lamichhane! ??